I-Villa Azul waterfront villa eBoca Brava Island - I-Airbnb
I-Villa Azul waterfront villa eBoca Brava Island
Kwisiqithi saseBoca Brava , phambi kwedolophana yabalobi yaseBoca Chica uza kufumana izindlu ezinendawo yokuphola eziyi-3 zakutshanje, ezinamagumbi okulala ayi-2, ayi-3 okanye ayi-4 kunye nepuli enkulu ene-bbq-area ukuze wonwabele ilanga okanye uchithe ingokuhlwa yakho, udibane nezinye iindwendwe!
Ukuhambahamba imizuzu eyi-10 kukusa ePlaya La Coca, i- 'jungle-beach' okanye ukuqalisa kokunyuka intaba usendle e-Isla Boca Brava.
Ngeevenkile zokutyela zaseBoca Chica ezikumgama we-500 mt kwisikhephe, uziva ukude kakhulu kubantu basekuhlaleni, wonwabele indlela ezithandwa ngayo iinkawu ezikwindalo, ezijikeleze izindlu ezinendawo yokuphola.
Ifikeleleka ngeemoto okanye ngesikhephe serhafu, ngokuthatha nje uhambo olufutshane ukusuka kwisibuko saseBoca Chica.
Singakuthatha kwisikhululo seenqwelo-moya sikaDavid size sikubeke kwinyathelo lomnyango we-villa nge-50$ iteksi + i-50 $ x isikhephe ukuya kutsho kubantu abayi-4. Abantu abayi-5 nangaphezulu: iteksi ye-70x + i-50 $ x ferry.
okanye ngeteksi ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya ukuya kutsho eBoca Chica kwaye kunakwisikhephe seteksi de kubekho idokhi yendlu enendawo yokuphola x 1$ x umntu
I-Villa Azul yindlu enamagumbi okulala ayi-2 ahonjiswe kakuhle, enendawo yokuhlambela eyi-2 enendawo yokuhlambela, i-AC kunye neefeni zesilingi kuwo onke amagumbi, i-jacuzzi kwigumbi lokuhlambela eliphambili, indawo enkulu yokuhlala enekhitshi elivulekileyo, i-terrasses evulekileyo kunye negadi entle yokuphila phandle phezu kolwandle.
Uza kufumana iiVilla -Azul/-Roja/-Turquesa kwi-Isla Boca Brava; phambi kwedolophana eyahlukileyo yabalobi yaseBoca Chica. Isikhephe esinamanzi sikusa kwimizuzu eyi-2, usd 1, -/p.p. Abaphathi bezo teksi baza kukunika iinkonzo zabo kuhambo lokuloba, lokubuka indawo okanye lokubuka iziqithi. Bonke bangabantu abanobuchule, abanobuchule kunye nobuntu obuzimeleyo: abadobi ziintlobo zokugqibela zabantu abazimeleyo! Bayazi indawo yokufumana intlanzi, ukubukela iminenga kukhulu ngeenyanga zikaJulayi ukuya kuNovemba kwaye iziqithi zihonjisiwe: iilwandle ezimhlophe ezigcwele ii-coconut-palms, ivenkile yokutyela enobubele eneentlanzi ezisandul 'ukulotywa kwimenyu okanye ukuntywila xa ulwandle luzolile.
I-Isla Boca Brava:
Ihlathini-paradise yeentaka neentaka. Unxweme olusentlango, a.o. playa de coco, kunye nokunyuka intaba phakathi kwehlathi kunye nengca. Ifama yethu ineqela leenkomo ezintle 'zasendle' kunye namahashe. Iindawo ezingcwele zemveli kunye neendawo zokujonga. Ulwandle olumangalisayo- kunye ne-estero-views. Nyuka ihotele iBoca Brava ukuze ufumane isidlo sasemini, ubuyise ngesikhephe serhafu. Kwi- 'strong and ezemidlalo': yiba nesidlo sakho sasemini uze udlule (simahla) kayak